Mohandas Gandhi | Biography
Umfanekiso wakhe ungenye yezona zibalaseleyo kwiimbali: umntu onqabileyo, onqabileyo, obhenqileyo obembethe iiglasi ezijikelezileyo kunye neengubo ezimhlophe ezimhlophe.
Ngu Mohandas Karamchand Gandhi, owaziwa ngokuba nguMahatma ("uMoya Omkhulu").
Umyalezo wakhe okhuthazayo wobungqina obunobundlobongela uncede ukukhokelela u-India ukuba azimele kwiBrithani yaseRashiya . UGandhi wayephila ubomi obulula nokuziphatha kakuhle, kwaye umzekelo wakhe uphefumlele abaqhankqalazi kunye nabaxhasi bamalungelo oluntu kunye nentando yeninzi emhlabeni jikelele.
Ubomi bokuqala bukaGandhi
Abazali bakaGandhi babengamaKarmachand Gandhi, dewan (urhuluneli) wesithili saseNdiya sasePalbandar, kunye nomfazi wakhe wesine uPutlibai. U-Mohandas wazalelwa ngo-1869, umntwana omncinane kunabantwana bakaPutlibai.
Uyise kaGandhi wayengumlawuli ofanelekileyo, okwazi ukudibanisa phakathi kwamagosa aseBrithani kunye nezifundo zendawo. Unina wayengumxhasi ohloniphekileyo we-Vaishnavis, unqulo lukaVishnu , kwaye wazinikela ekuzila ukutya nasekuthandazeni. Wafundisa iimilinganiselo ze-Mohandas ezifana nokunyamezela kunye ne- ahimsa , okanye i-noninjury kwizinto eziphilayo.
UMohanas wayengumfundi ongenamdla, waze wayitshisa kwaye wayidla inyama ngexesha lokuvukela kwakhe.
Ngo-1883, uGandhis wahlela umtshato phakathi kuka-Mohandas oneminyaka engama-13 kunye nentombazana eneminyaka eyi-14 okuthiwa uKasturba Makhanji. Umntwana wokuqala wesibini waza wabulawa ngo-1885, kodwa babenamadodana amane asaphila ngo-1900.
UMohanas waqeda isikolo esiphakathi nasesikolweni esiphakeme emva komtshato.
Wayefuna ukuba ngugqirha, kodwa abazali bakhe bamqhubela emthethweni. Babefuna ukuba alandele ezinyathelweni zikayise. Kwakhona, unqulo lwabo luyakwenqabela ukuhlaselwa, okuyinxalenye yoqeqesho lwezonyango.
Intsha yaseGandhi yayingadlulanga imviwo yokungena kwiYunivesithi yaseBombay kwaye yabhalisa kwiKholeji yaseSamaldas eGujarat, kodwa wayengekho uvuyo apho.
NgoSeptemba ka-1888, uGandhi wathuthela eNgilani waqalisa ukuqeqesha njengomgcini we-University College yaseLondon. Ngokokuqala ngqa ebomini bakhe, le nsizwa yazibandakanya kwizifundo zayo, isebenza kanzima kwizakhono zesiLwimi nesiLatini. Kwakhona wayenomdla omtsha kunqulo, efunda ngokubanzi kwiintsapho zehlabathi ezahlukeneyo.
UGandhi wajoyina iLondon Vegetarian Society, apho wafumanisa iqela elifana neengcali zeengcamango kunye nabantu. Ezi nxibelelwano zanceda ukujonga imibono kaGandhi ebomini nasepolitiki.
Wabuyela eIndiya ngo-1891 emva kokufumana idigri yakhe, kodwa akakwazanga ukuhlala apho njengenqabana.
UGandhi uya eNingizimu Afrika
Ukuphazamiseka ngenxa yokungabikho kwamathuba eNdiya, uGandhi wamkela isibonelelo somvumelwano wexesha elide kunye ne-Indian law firm eNatali, eMzantsi Afrika ngo-1893.
Kulapho, ummeli oneminyaka engama-24 ubudala wafumana ulwahlulo olubuhlungu lobuhlanga lokuqala. Watshitshiswa kwisitimela sokuzama ukukhwela kwinqwelo yokuqala (apho wayenayo ithikithi), wabethwa ngenxa yokwenqaba ukubeka isihlalo sakhe kwisigodlo saseYurophu, kwaye wayefanele aye enkundleni apho wayala ukuba asuse ingubo yakhe. UGandhi wenqaba, kwaye ngaloo ndlela waqala umsebenzi wokumelana nokuphikisana.
Emva kokuba isivumelwano sakhe sonyaka omnye siphelile, waceba ukubuyela eIndiya.
Njengoko uGandhi wayesele ephuma eMzantsi Afrika, ibhilikhwe yavela eNkundleni yaseNatali ukuba iphikise amaNdiya ilungelo lokuvota. Wagqiba kwelokuhlala kunye nokulwa nomthetho; nangona kunjalo izikhalazo zakhe, kunjalo, zadlula.
Nangona kunjalo, iphulo lokuchasana likaGandhi lenza ingqalelo yoluntu kumaxhala aseNdiya eMzantsi Afrika yaseBritani. Waseka iNational Indian Congress ngo-1894 waza waba nguNobhala. Intlangano yeGandhi kunye nezikhalazo kuRhulumente waseMzantsi Afrika ukhange iLondon neIndiya.
Xa ebuyela eMzantsi Afrika esuka e-Indiya ngo-1897, ixhoba elimhlophe lynch lahlasela. Kamva wenqaba ukunyusa amacala.
IMfazwe yaseBoer kunye noMthetho wokuBhalisa:
UGandhi wanxusa amaNdiya ukuba axhasane noorhulumente waseBrithani ekugqibeleni kweMfazwe yaseBoer ngo-1899 kwaye iqulethe iigulane zamalungu ama-1 100 amavolontiya aseNdiya.
Wayenethemba lokuba ubungqina bokunyaniseka buya kubangela unyango olungcono lwabantu baseMzantsi Afrika baseMzantsi Afrika.
Nangona abaseBrithani bawulwa yimfazwe kwaye bazisa uxolo phakathi kwabamhlophe baseMzantsi Afrika, unyango lwamaNdiya lubuhlungu. UGandhi kunye nabalandeli bakhe babethwa baza bavalelwa ngenxa yokuchasana noMthetho we-Registration ka-1906, apho abemi baseNdiya bekufuneka babhalise kwaye bathathe amakhadi e-ID ngezikhathi zonke.
Ngo-1914, iminyaka engama-21 emva kokufika kwakhe kwisivumelwano seminyaka esisodwa, uGandhi washiya uMzantsi Afrika.
Buyela e Indiya
UGandhi wabuyela e-Indiya walukhuni kwaye waqonda ngokucacileyo ukungabi nabulungisa kweBrithani. Kwiminyaka emithathu yokuqala, nangona kunjalo, wahlala ngaphandle kweziko lezopolitiko eNdiya. Waye waqesha amajoni aseNdiya ukuba aphinde ahlasele i-Army yaseBrithani, ngeli xesha ukulwa kwiMfazwe Yehlabathi I.
Ngo-1919, ke, wamemezela ukuchasana okungabonobundlobongela (i- satyagraha ) ngokumelene no-Rowlatt Act yaseBrithani. Ngaphantsi kweRowlatt, urhulumente wase-Indiya waboloni ungabamba abatshutshisi ngaphandle kwemvume kwaye abanjwe ngaphandle kwetyala. Lo Mthetho wanciphisa inkululeko yokunyusa.
Iintlanzi kunye nezibhikiso zisasazeka kulo lonke elaseIndiya, likhula kulo lonke entwasahlobo. UGandhi wadibana nommeli omncinci wecala lokuzimela ngokuzimela, ogama linguJawaharlal Nehru , owaye waba nguNdunankulu wokuqala we-Indiya. Inkokeli ye-Muslim League, u- Muhammad Ali Jinnah , yachasa amaqhinga abo kwaye yafuna ukuzimela.
Ukubulawa Kwama-Amritsar noTyuwa ngoMatshi
Ngomhla ka-Apreli 13, 1919, amabutho aseBritani phantsi koBrigadier-General Reginald Dyer avula umlilo kwisihlwele esingakhange sihlaselwe entendelezweni yaseJallianwala Bagh.
Phakathi kwama-379 (inani laseBrithani) kunye ne-1,499 (inani lamaNdiya) lamadoda angama-5 000, abafazi kunye nabantwana abasweleyo bafa kwi-melee.
I-Jallianwala Bagh okanye i- Amritsar I-Massacre yajika inkululeko yokuzimela yase-Indiya ibe yimbangela yesizwe kwaye yazisa uGandhi kwilizwe. Umsebenzi wakhe wokuzimela ufikelele ngo-1930 Ityuwa ngo-Matshi xa wayekhokela abalandeli bakhe elwandle ukuba benze ityuwa ngokungekho mthethweni, umbhikisho ngokubhekiselele kwiirhafu zetyuwa zaseBrithani.
Abanye abazibhenela ababhikishi baphinde baphendukela kwindlobongela.
IMfazwe Yehlabathi II kunye ne-"Quit India"
Xa iMfazwe Yehlabathi II yaqala ngo-1939, iBrithani yajika yamakholeji ayo, kuquka neIndiya, ngamasoldati. Gandhi yaphikisana; Wayexhalabele kakhulu ngokunyuka kwe-fascism emhlabeni wonke, kodwa naye waba ngumdlali ozinzileyo. Akungabazeki, wayekhumbula izifundo zeMfazwe yaseBoer kunye neMfazwe Yehlabathi I - ukunyaniseka koorhulumente bokoloni ngexesha lemfazwe akuzange kubekho unyango olungcono emva koko.
Ngo-Matshi ka-1942, umphathiswa webhabhinethi waseBrithani uSir Stafford Cripps wanikela amaNdiya uhlobo lokuzimela eMbusweni waseBrithani ngokutshintshela inkxaso yempi. Izikhulo zinikela ngokuquka isicwangciso sokuhlula amaqela amaHindu namaSilamsi aseIndiya, oko uGandhi akufumananga kwamkeleka. Iqela le-Indian National Congress lalilahle icebo.
Ngehlobo, uGandhi wakhupha iBritani ukuba "Yeka iIndiya" ngokukhawuleza. Urhulumente wekholoni wamphatha ngokubamba zonke iinkokheli zeCongress, kuquka uGandhi nomkakhe uKasturba. Njengoko imibhikisho echasene nekoloniyali yanda, urhulumente waseRajari wabanjwa waza wavalela ngamakhulu amawaka amaNdiya.
Okubuhlungu kukuba, uKasturba wafa ngoFebruwari 1944 emva kweenyanga ezili-18 entolongweni. UGandhi wagula kakhulu nge-malaria, ngoko iBritani yamkhulula entolongweni. Iimpembelelo zezopolitiko zaziya kutshabalalisa ukuba naye wafa ejele.
Ukuzimela KwamaNdiya kunye neSahlulo
Ngomnyaka we-1944, iBrithani ithembise ukunika ukuzimela kwiIndiya emva kokuba imfazwe iphelile. UGandhi wabiza iCongress ukuba iphinde iphinde ikhuphe isiphakamiso kwakhona ukususela ekubekeni isahlulo seNdiya kubeni ibeka isahlulo seNdiya phakathi kwamaHindu, amaSilamsi namaSikh. Amazwe amaHindu aya kuba luhlanga olulodwa, ngelixa amaSilamsi kunye namaSikh beya kuba ngabanye.
Xa ubundlobongela beecawa beqhaqha izixeko zaseIndiya ngo-1946, beshiye abangaphezu kwama-5 000 abafileyo, amalungu eqela leCongress agqugquzela uGandhi ukuba kuphela okukhethwa kukho kubekwahlulo okanye imfazwe yombutho. Wavumelana ngokungafuni, waza wahamba ngesiteleka sokulamba indlala eselunxwemeni eDelhi naseCalcutta.
Ngo-Agasti 14, 1947, iRiphabhliki yase- Pakistan yasePakistan yasungulwa. IRiphabhliki yaseIndiya yashicilela ukuzimela kwayo ngosuku olulandelayo.
NgoJanuwari 30, 1948, uMonghandas Gandhi wadutshulwa wabulawa ngumfana omdala ongumHindu ogama linguNathuram Godse. Umbulali ubeke uGandhi ngenxa yokunciphisa iNdiya ngokugxininisa ekuhlawuleleni ukubuyisela ePakistan. Nangona uGandhi enqaba udlame nokuphindiselela ngexesha lokuphila kwakhe, u-Godse kunye ne-accomplice nabo babulawa ngo-1949 ngenxa yokubulala.
Ngolwazi oluthe vetshe, nceda ubone "ii- Quotes ezivela eMahatma Gandhi ." Ubume obude bufumaneka kwi-website ye-About.com ye-20 ye-History History, kwi " Biography of Mahatma Gandhi ." Ukongezelela, isiKhokelo sobuHindu sinoluhlu lwe " Iingcaphuno ezi-10 eziphezulu kwi-God & Religion " nguGandhi.
King Mithridates yasePonto - Umhlobo kunye neNtshaba yamaRoma
Ukubetha iikhatywayo zebhola lebhola lebhola
Uluphi Uluhlu Oluhlaza?
Ukufunda Isigama kunye neefomu zegama
Iimbongo zeNdlovu Wonke umntu kufuneka azi
Iron Iron - Impindiselo, i-Industrialist, iHero
Imibono yokufa yeeNgelosi
Yimvelaphi yeS Swastika
"Ibali elithandayo": Isikhokelo soFundo